James Swan & Monica Juma oo ka wada hadlay xaaladda amaan ee Soomaaliya! | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta James Swan & Monica Juma oo ka wada hadlay xaaladda amaan ee...
James Swan & Monica Juma oo ka wada hadlay xaaladda amaan ee Soomaaliya!
James Swan, wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo Nairobi kula kulmay Xoghayaha difaaca dalka Kenya, Monica Juma, ayaa kala hadlay xaaladda amni ee gobolka Geeska Afrika.
Xoghayaha arrimaha difaaca dalka Kenya, Monica Juma oo qoraal soo dhigtay Barteeda Twitter-ka ayaa ku sheegtay in Swan ay ka wada hadleen “xaalada amni ee Geeska Afrika & isdhaafsiga fikradaha ku saabsan qaababka loo xoojin karo iskaashiga amaanka ee gobolka”.
Swan iyo Monica Juma, ayaa ka wada hadlay xaalada amni ee Soomaaliya maadaama dowladda Kenya ay qayb ka tahay wadama ciidamada ugu deeqay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM.
Sarkaal ka tirsan wasaaradda Difaaca Kenya ayaa laga soo xigtay in ay kulanka lagu soo hadal qaaday in ciidanka AMISOM, oo qorshuhu yahay in ay ka baxaan Soomaaliya December 2021, ay Kenya dalbaday in waqtiga loo dheereeyo iyaga oo ku doodaya in Al Shabaab ay xooganyihiin guddaha Soomaaliya.
James Swan ayaa dhawaan socdal ku tegay qaar kamid ah dalalka Carbeed ee saameynta ku leh siyaasadda Soomaaliya gar ahaan Sacuudiga & Imaaraadka, isaga oo kala hadlay arrimaha amnga & doorashada Somaaliya.
Socdaalka Wakiilka Qaramada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Swan uu ku tegay Magaalada Nairobi ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli dhawaan xal laga gaaray khilaafkii diblumaasaiyadeed ee u dhaxeeyay Soomaaliya & Kenya.
Previous articleGuddiga Doorashada Puntland oo doortay guddoomiye iyo ku xigeenkiisa
Next articleEthiopia oo bilowday buuxinta biya-xireenka Nile iyo Masar oo ka carootay